Madaxweyne Xasan: Musa Haji marna la taliye kama noqon xafiiskegya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan: Musa Haji marna la taliye kama noqon xafiiskegya
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyey in nin la taliye u ah uu ku lug lahaa hub ay dowladdu leedahay uu Alshabaab loo gacan geliyey. Arrinkaas oo ay horay u sheegeen kooxda kormeerka cunaqbateynta hubka Soomaaliya iyo Eretria.
Warixinta kooda UN-ka ayaa lagu sheegay in nin lagu magacaabo Musa Haji Mohamed Ganjab, oo ah ganacsade qaab la taliyey ula shaqeeya madaxweyne Xasan uu hub gudbiyey Alshabaab.
“Ma jiro nin lagu magacaabo Musa oo ah la taliye ka tirsan xafiiskeyga, xitaa weli sooma marin xafiiskeyga, waxaana jeclaan lahaa in kooxda kormeerku cadeeyaan cidda uu yahay Musa Haji” ayuu madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay France24.
Kooxda la socodka cunaqavateynta hubka Soomaaliya iyo Eretria ayaa dhawaan soo saartay warbixin cusub oo ay ku sheegtay in hubka dhawaanahan ay la imaaneysay Soomaaliya lagu iibiyo suuqyo furan oo ku yaalla Muqdisho.
Xeer Ilaalyaha Qaranka: Waa la in dhaqangeliyo sharciga Golaha Adeega Garsoorka
Dowladda Nigeria iyo Boko Haram oo heshiis gaaray